Khin Ma Ma Myo's Blog: July 2008
river (part- 7) (Novel)
river (part- 6) ( Novel)
Short Essays: The Impact of Political Factors on t...
education and development (part-2)
Essays: The nature of US imperialism in the post- ...
Essays: National Power, Population & Economic Grow...
Short essays: Rawl's theory and inheritance policy...
Short essays: The drugs issue
Famous people, famous sayings : John Maynard Keyne...
Good websites for scholarships and studentships
မြစ်တစ်စင်း (အပိုင်း- ၇)
“ညီမလေး၊ မောနေပြီလား။ ရော့- ရေသောက်လိုက်ဦး”
မမောဘူးလို့ ဟန်ဆောင်ပြောချင်ပေမယ့် မောနေတာ သိသာနေသည်မို့ သူပေးသော ရေဗူးကိုပင် ဆွဲယူမောပစ်ရသည်။ တောင်တက်ခရီးကြမ်းတခုက ဒီလိုသွားဖြစ်မို့ သူမဘ၀တလျှောက် အိပ်မက်ထဲပင် ထည့်မမက်ဖူးခဲ့ပါ။ သို့ပေမယ့်လဲလေ၊ ချစ်သူနှင့် အတူသွားရသည့် ခရီးလမ်းမို့ လူပမ်း၊ စိတ်နွမ်းအဖြစ်သို့ လုံးဝမရောက်ပါ။ ချစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်မှု၊တောင်ဂမူအတက်များ၊ လျောစောက်များတွင် ဖေးမကူတွဲမှုတို့သည် ပျော်စရာ၊ ကြည်နူးဖွယ်ရာများ အဖြစ်သို့ပင် ပြောင်းလဲသွားလေသည်။
“ကိုဇော်ဝင်း၊ ကျွန်မတို့လဲ ပါသေးတယ်လေ။ သိပ်မျက်နှာလိုက်လွန်းနေပြီနော်”
သူမနောက်မှပါလာသော အစ်ကို့သူငယ်ချင်းများက လှမ်းနောက်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ကျောင်းပိတ်ရက်အပြီး၊ ကျောင်းပြန်အဖွင့်တွင် အစ်ကိုဆွဲခန့်ကျောင်းဆရာအဖြစ် လုပ်နေသော တောင်ပေါ်ရွာလေးသို့ အလည်လိုက်သွားနေကြခြင်းပါ။
အောက်တိုဘာ (၂၁) ရက်တွင် တောင်ကြီးသို့ ပြန်ရောက်သော သူမသည် အမှတ်မထင် လူတယောက်ကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး၊ ဒီဇင်ဘာ (၂၆) ရက်တွင် ချစ်သူတယောက်ရရှိခဲ့ခြင်းကတော့ ထူးဆန်းလှစွာသော ကံကြမ္မာ၏ ဖန်တီးပေးမှုပင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ နာမည်ပင် မသိလိုက်ရသော လူတယောက်သည် တိုက်ဆိုင်စွာပင် သူမတောင်ကြီးမှာ ဆက်သွယ်ရမည့် လူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ အစိုးရ ကျောင်းဆရာများမရှိသော လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသည့် တောင်ပေါ်ရွာကလေးတွင် ရွာမှခန့်သော ဆွဲခန့် ကျောင်းဆရာလေးလုပ်နေသည့် သူ့အား တပတ်တကြိမ်ပင် တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီး သူပြောပြသည့် ရှစ်လေးလုံးအကြောင်းများ၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်း ကာလ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းများ၊ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းများ၊ စစ်အစိုးရ အကျဉ်းထောင်များနှင့် ထောက်လှမ်းရေးစခန်းများမှ ငရဲခန်းများ စသည်တို့ကို မယုံနိုင်လောက်အောင်ပင် ကြားသိခဲ့ရသည်။ သူပေးဖတ်သည့် လျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်းထားသော ရှစ်လေးလုံးကာလစာစောင်များကိုလည်း ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ဖတ်ခဲ့ရသည်။ သူသင်ပြသော မြေအောက်လှုပ်ရှားမှု သင်ခန်းစာများကိုလည်း တလေးတစား နာယူဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်း သူပြန်လာမည့်အချိန်တွင် ကားဂိတ်တွင် သွားစောင့်ရင်း သူရောက်လာသည်နှင့် သူအရမ်းကြိုက်သည့် ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ်ဟင်းနှင့် အခြားစားဖွယ်ရာများကို စားသောက်ဆိုင်မှာ ၀င်ဝယ်ကာ သူပိုင်ဆိုင်သည့် ပျဉ်ထောင်အိမ်ငယ်လေးမှ စားပွဲဝိုင်းလေးမှာ အတူထမင်းစားကြ၊ အခါးရေ (ရေနွေးကြမ်း) သောက်ပြီး၊ နိုင်ငံရေးစကားများပြောကြ၊ သူမအသိမိတ်ဆွေများအကြား စည်းရုံးရေး အကြောင်းများ ပြောကြနှင့်၊ ညနေစောင်းတော့ သူ့ရပ်ကွက်ထဲမှ ရှမ်းစားသောက်ဆိုင်လေးတွင် ဟင်းထုပ်၊ ငါးထမင်းနယ်၊ တိုဖူးသုပ်များ အတူသွားစားကြပြီးမှ သူမပြန်ဖြစ်လေသည်။
နောက်တနေ့နံနက်တွင်လဲ နံနက်စောစောထလေ့မရှိသော သူမသည် နံနက်အစောကြီး နိုးနေခဲ့ပြီး သူ့ကို ကားဂိတ်သို့ လိုက်ပို့ပေးတတ်စမြဲ။ ကားမထွက်ခင် သူနှင့် အတူစားရသည့် ရှမ်းခေါက်ဆွဲ အရသာကို သူမနှစ်သက်နေတတ်ခဲ့ပြီကိုး။ ဒီလိုနှင့် ရင်းနှီးမှုမြန်ခဲ့သော သူမတို့နှစ်ယောက် တယောက်ကို တယောက် နားလည်မှုတွေနဲ့အတူ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။
သူ့အားချစ်သူအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည့်အကြောင်း သူငယ်ချင်းများအား ဖွင့်ပြောသည့် အခါမှာတော့ အားလုံးက စိုးရိမ်တကြီး တားဆီးပိတ်ပင်ကြပါသည်။ နိုင်ငံရေးသမားတဲ့၊ မရှိဆင်းရဲသားတဲ့၊ အလုပ်အကိုင်ပင် အခြေတကျမရှိတဲ့ ရွာဆွဲခန့် ကျောင်းဆရာတဲ့၊ သူမထက်အသက်ပိုကြီးတယ်တဲ့၊ စသဖြင့် သူ့အားအပုပ်ချပြောကြ၊ သူမအား စိတ်ကူးမယဉ်ဖို့ ပြောကြနှင့်။ သို့ပေမယ့်လဲ ထိုနိုင်ငံရေးသမားဆိုသည်မှာ သူမအတွက်တော့ ဂုဏ်ပုဒ်တခုပင် ဖြစ်ပါသည်။
သူမချစ်သူလေးသည် အာဏာတွေ၊ ရာထူးတွေ၊ အခွင့်အရေးတွေကို မက်မော၍ နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူမဟုတ်၊ ခါတော်မှီနိုင်ငံရေးသမားလဲမဟုတ်ပဲ ပြည်သူလူထု၏ ဘ၀ဆင်းရဲတွေကို တွေ့မြင်ပြီး လူထုဘက်မှ ရပ်တည်နေသူဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲကျပ်တည်းလှသော အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူများအကြောင်းပြောရင်း ၀ဲတက်လာသော ယောက်ျားသား တယောက်ရဲ့ မျက်ရည်စနောက်ကွယ်က ရင်တွင်းခံစားချက်ကို သူမမြင်တတ်ပါသည်လေ။ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလက စစ်တပ်မှ သေနတ်နှင့်ပစ်စဉ် သူ့ဘေးမှ ဒဏ်ရာရသူကို ဆွဲကူရင်း သွေးတို့စွန်းပေခဲ့သည့် ပင်နီတိုက်ပုံလေးကို အမှတ်တရသိမ်းထားဆဲ ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးသမား၊ “အပြင်မှာလွှင့်ထူလို့မရသေးပေမယ့် တိုက်ပွဲဝင်ခွပ်ဒေါင်းအလံကို ရင်ထဲမှာ အမြဲလွှင့်ထူထားတယ်။ ဒီအလံနဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို ဘယ်အရာကမှ လာနှဲ့လို့မရဘူး” လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ရဲရဲတောက်ယောက်ျား။ ဒီလိုလူတယောက်ရဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရခြင်းဟာ ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူဖို့ ကောင်းလိုက်ပါသလဲ။
ပြီးတော့ မရှိဆင်းရဲသားဆိုသည့် သူမချစ်သူလေးသည် ကျောက်မျက်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်ထားသူဖြစ်ပြီး၊ မိုင်းရှူးကျောက်ဈေးကွက်ထဲဝင်လျှင်ဖြစ်စေ၊ စစ်အစိုးရနှင့် တွဲစပ်လုပ်နေသော ကျောက်ကွက်များတွင် အလုပ်လုပ်လျှင်ဖြစ်စေ ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်ပါလျက် သူယုံကြည်ရာဘ၀တွင် နေထိုင်နေသူုဖြစ်သည်။ တလလျှင် လစာအနည်းငယ်နှင့် ရွာထဲနေစဉ် စားစရိတ်ငြိမ်းခံစားခွင့်ကိုသာရသော သူ့အား မြို့ပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် သူမပြောကြည့်ဖူးလေသည်။
“အခုအစ်ကိုလုပ်နေတဲ့ ရွာလေးက အရမ်းခေါင်တယ်ညီမလေး။ ဘယ်အစိုးရခန့်ဆရာမှမလာဘူး။ ရွာကကျောင်းလေးမှာ ကျောင်းသား သုံးဆယ့်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ လူသုံးဆယ့်တစ်ယောက်ရဲ့ ပညာမျက်စိကို ဘာနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်မလဲညီမလေး။ ပြီးတော့အစ်ကိုဟာ တော်လှန်ရေးသမားပါ။ တော်လှန်ရေးသမားတယောက်ဟာ လူထုထဲမှာ နေရတယ်။ လူထုနဲ့ တသားတည်းရှိနေရတယ်။ လူထုတော်လှန်ရေးဆိုပြီး လူထုနဲ့ကင်းကွာနေတာဟာ စစ်မြေပြင်ကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေတာနဲ့ အတူတူပဲ” ဆိုတဲ့ စကားသံလေးကို သူထံမှ ပြန်ကြားပြီးသည့်အဆုံး သူမရင်ထဲမှ ချစ်စိတ်တွင် လေးစားမြတ်နိုးစိတ်တို့ပါ တွဲခိုသွားခဲ့ရပါသည်။
“အစ်ကို၊ ရွာရောက်ရင် ဘာကျွေးမှာလဲ”
”ရွာထဲမှာ တိုဖူးသုတ်ဆိုင်လေးတဆိုင်ပဲရှိတယ်ညီမလေးရဲ့။ အဲဒီမှာ ညီမလေးစိတ်တိုင်းကျစား။ မ၀သေးရင် ဘယ်အိမ်မှာ သွားစားစားရတယ်”
“အယ်- မစားပါဘူး။ ရှက်စရာကြီး”
သူမဖျတ်ခနဲပြန်ပြောတော့ သူက သဘောကျစွာရယ်လေသည်။
“သူ့ကိုပစ်မထားနဲ့နော်ညီမလေး။ အဲဒီဆိုင်က ပအိုဝ့်မလေးက အရမ်းချောတာ”
“အမယ်။ ငါ့ညီမလေးကလဲ အပြောကောင်းပဲ။ ကိုဇော်ဝင်းတို့ ဘယ်လိုများ ရှာတွေ့သွားတယ်မသိဘူး”
အစ်ကို့သူငယ်ချင်းအစ်မကြီးတယောက်က၀င်ပြောသည်။ ရိုးသားပွင့်လင်းသူများမို့ ဒီနေ့မှ တွေ့ပေမယ့် ညီအစ်မများပမာ ရင်းနှီးသွားရသည်။ သူမသူငယ်ချင်းများသည် အစ်ကို့သူငယ်ချင်းများဖြစ်မလာပေမယ့် အစ်ကို့သူငယ်ချင်းများကတော့ သူမနှင့် ရင်းနှီးသူများ ဖြစ်လာရပေမည်။ တချိန်တွင် လိုအပ်လာပါ အစ်ကို့ဘ၀ထဲသို့ သူမ၀င်ရမည်မဟုတ်ပါလား။ ပြီးတော့ ထိုအစ်မကြီးများသည် ရှစ်လေးလုံးကာလကတည်းက အစ်ကိုနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်လေသည်။ ဆယ်စုနှစ်တခုကြာသည်အထိ အပြန်အလှန်သစ္စာရှိစွာ၊ ခင်မင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေကောင်းများ ရဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါဘိခြင်း။ တူညီသောစိတ်ဓာတ်၊ ခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်၊ ဖြူစင်ရိုးသားသော စေတနာနှင့် ဖြောင့်မတ်ပွင့်လင်းသော ဆက်ဆံရေးတို့ကြောင့်ပင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့တိုင်း သူတို့တတွေ အမြဲဆုံကြတာ၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီး ကျဆုံးသွားသူတွေကို အမျှဝေတာလေးတွေ သိရတော့ သူမရင်ထဲ လှပ်ခနဲပင်ဖြစ်သွားသည်။ အို- ဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ပေါင်းစည်းသွားနိုင်တဲ့ တနေ့ဟာ တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့နေ့ပဲ ဖြစ်မှာပါ။
မြစ်တစ်စင်း (အပိုင်း- ၆)
“ညီမလေး၊ ဘယ်လဲ။ ဟဲဟိုးပဲလား”
မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်တွင် တာဝန်ကျနေသူ အက်စ်ဘီ (special branch) မှ အစ်မကြီးတဦးကမေးသည်။ ရန်ကုန်- ဟဲဟိုးခရီးစဉ်များ၊ အခြားခရီးစဉ်များ မြောက်မြားစွာကို သွားလာနေသော သူမနှင့် မျက်မှန်းတန်းမိနေသူ တယောက်။
“ဟုတ်တယ်အစ်မ။ ဟဲဟိုးပဲ။ ရန်ကုန်သင်တန်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ အပြီးပြန်မှာ။ အလုပ်ကိစ္စတွေလဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လွှဲထားခဲ့တယ်။ တလတခါ သွားလိုက်လာလိုက်တွေတော့ ပြီးသွားပြီပေါ့။ အလုပ်ရှိမှပဲ လာဖြစ်တော့မယ်”
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာသင်တန်းတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း စိတ်မချနိုင်သူ မေမေနှင့်ဖွားဖွားတို့အား တလတခါ ပြန်တွေ့နေရသည်မို့ ရန်ကုန်- ဟဲဟိုးခရီးစဉ်သည် သူမအတွက်တော့ အလွတ်ပင်ရနေပေပြီ။ တနာရီဆယ်မိနစ်ခန့်သာရှိသော လေယာဉ်ခရီးစဉ်လေးအား ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန်သွားရင်း လေယာဉ်တစီးသာအပိုင်ရှိရင် နေ့တိုင်းသွားနိုင်မှာပဲဟု စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်မိသေးသည်။
“အစ်မတောင် ပရိုမိုးရှင်းနဲ့တောင်ကြီးပြောင်းရမယ်သိလား။ အတော်ပဲ။ ညီမလေးလို နယ်ခံရှိနေတော့”
“ဟာ၊ ဟုတ်လားအစ်မ။ ကျွန်မနယ်ရောက်လာရင်တော့ ဘာမှစိတ်မပူနဲ့။ အားလုံးအဆင်ပြေစေရမယ်။ ခဏလေးနော်အစ်မ။ လိပ်စာကတ်တခါတည်းပေးထားခဲ့မယ်”
“ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးအစ်မရယ်။ အချင်းချင်းတွေပဲ။ ကဲ- ကျွန်မ၀င်တော့မယ်နော်”
ပြောရင်းနှင့် သူမရင်ထဲမှပေါ်လာသော ရယ်ချင်စိတ်ကို မနည်းထိန်းချုပ်ထားခဲ့ရသည်။ အချင်းချင်းဟု ပြောနေသော သူမလက်တွင်ကိုင်ထားသည် အိတ်ထဲတွင်ရှိနေသော စာရွက်တချို့၊ စာအုပ်တချို့ကိုသာ မြင်သွားလျှင် ထိုအစ်မဘယ်လိုနေမည်မသိ။
“အခု ကျွန်မပြန်လာတာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး။ လိုအပ်ရင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ပါဝင်ဖို့ပြန်လာတာ”
ဒီစကားကိုတော့ သူမရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားလိုက်ပါသည်။ ဘယ်သူမှ သိလို့မဖြစ်ပါ။ မေမေ့ကိုပင် အသိပေးလို့မဖြစ်။ ဘယ်သူနှင့် ဆက်သွယ်ရမည်ကို ရန်ကုန်မိတ်ဆွေမှ ပြောပြထားသည်မို့ ထိုလူကိုပင် တွေ့အောင်ရှာရပေမည်။
ထိုအစ်မကပြောရင်း စောင့်ဆိုင်းနားနေခန်းအထိ လိုက်ပို့ပေးသည်။
သူမလက်အားဆုပ်ကိုင်လိုက်သော အထိအတွေ့နှင့် အသံသဲ့သဲ့ကြောင့် သူမရုတ်တရက် လန့်နိုးသွားသည်။
“ ဟင်၊ မြွေတွေရော၊ မြွေတွေရော”
သူမလက်အား ခပ်ဆတ်ဆတ်လှုပ်ရမ်းလိုက်တော့မှ သူမသတိဝင်လာရသည်။ ပြုံးကြည့်နေသော လေယာဉ်မယ်အား တွေ့သဖြင့် ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ပြန်ပြံုးပြမိသည်။ လေယာဉ်ပေါ်တွင် ခေတ္တအိပ်မောကျသွားဟန်တူသည်။ သို့ပေမယ့် မြင်မက်ရသော အိပ်မက်က အထူးအဆန်း။ မြွေတွေအများကြီးရှိနေသော တွင်းတွင်းအား ခုန်ကျော်ဖြတ်ကူးရန် ကြိုးစားနေဆဲ တဘက်တွင်ရှိနေသော လူတယောက်က လက်ကမ်းပေးနေလေသည်။ မျက်နှာကို မမြင်ရပေမယ့် ညာဘက်လက်တံတောင်ဆစ်နှင့် မနီးမဝေးတွင် ရှိနေသော အမှတ်တခုကတော့ သူမအာရုံထဲ တွဲခိုလာခဲ့သည်။ ဒီလိုပါပဲ။ သွေးလေချောက်ချားမက်တတ်သည်ပေါ့။ သူမအိတ်ထဲတွင်က နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သော စာရွက်တချို့ပါလာသည်ကိုး။ ပထမဦးဆုံး လက်ဝယ်ကိုင်ပြီး ခရီးသွားရတာဆိုတော့ သူမ နည်းနည်းတော့ ကြောက်မိသလိုလို။
နယ်လေဆိပ်ဖြစ်သော ဟဲဟိုးလေဆိပ်လေးတွင်တော့ အခက်အခဲက မရှိလှပါ။ တာဝန်ကျအားလုံးများနှင့်ကလည်း သိနေပြီးသားဆိုတော့ သူမကိုယ့်အိတ်ကိုပင် ကိုယ်တိုင်ဆွဲရန်မလို။ သူတို့ကတောင် ကူညီဆွဲပေးလိုက်သေးသည်။
ဒရိုင်ဘာဦးထွန်းခွင့်ယူထားပြီး၊ မေမေကလဲ သွားစရာရှိနေ၍ လူနာတယောက်၏ အမျိုးဖြစ်သူအား အကြိုလွှတ်လိုက်မည်ဟု မေမေ့ဆီက ဖုန်းရထားသဖြင့် လာကြိုမည့် လူစိမ်းအား လိုက်ရှာမိသည်။ လေဆိပ်အဆောက်အအုံရှေ့တွင်ကား လူအများ ၀ိုင်းအုံနေပါသည်။ ခရီးဆိုက်လာမည့်သူကို ၀မ်းသာအားရ စောင့်ဆိုင်းကြိုတတ်ကြသည်မှာ မြန်မာ့ ဓလေ့တမျိုးပင် ဖြစ်သည်ကိုး။
၀ိုင်းအုံနေသော လူအများကြားမှ လူတယောက်နှင့် မျက်ဝန်းချင်း ဆုံမိစဉ်ခဏ သူမရုတ်တရက်ရင်ခုန်သွားသည်။ ထိုလူ သူမအနီး ရောက်လာသည်အထိ သူမမှာ ရင်အခုန်မရပ်သေး။ အနီးလာပြီး သူမနာမည်မေးတော့မှ မေမေလွှတ်လိုက်သည့်သူမှန်း သတိပြုလိုက်မိသည်။ သူမအိတ်အားဆွဲပြီး ကားရပ်ထားရာဆီသို့ သွားနေသည့် ထိုသူအား ကျောပြင်မှနေ၍ သူမကြည့်နေမိသည်။ စိတ်ထဲတွင် ဘယ်လိုဖြစ်နေသည်မသိ။ မမြင်ဖူးသည့်လူတယောက်၊ မသိသေးသည့် လူတယောက်အား ရင်ခုန်မိသွားခြင်းအတွက် သူမကိုယ်သူမ စိတ်တိုမိသည်။ မဖြစ်သင့်။ လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါ။ ယောက်ျားများစွာနှင့် အလုပ်သဘောအရ၊ လူမှုရေးအရ ဆက်ဆံပြောဆိုနေရသော သူမသည် အမည်ပင် မသိသေးသူတယောက်နှင့် မျက်လုံးချင်းဆုံမိသည်နှင့် ရင်ခုန်ရလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်ကို လုံးဝမကျေနပ်။ သူမကိုယ်သူမ ရင့်ကျက်ပြီးသားဟု လွဲမှားစွာ အထင်ကြီးနေခဲ့လေသည်။ သြော်- တကယ်တမ်းကျတော့ အချစ်နဲ့တွေ့ရင် ဘယ်သူမှ မရင့်ကျက်နိုင်ကြပါလား။
“မြတ်စွာဘုရား။ ငါဘာတွေတွေးနေမိပါလိမ့်။ အချစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးက ဘာကြောင့် ငါ့ခေါင်းထဲ ပေါ်လာရတာလဲ”
ထိုသူက ကားနောက်ခန်းတံခါးအား ဖွင့်ပေးသည်။
ဒရိုင်ဘာနှင့်ဆိုလျှင် နောက်ခန်းမှာပဲ စီးရတာပေမယ့် သူကကျတော့ ခဏကားလာမောင်းပေးသည်ပဲလေ။ အကူအညီလာပေးသူကို ဒီလိုမလုပ်သင့်။ ပြီးတော့ သူနှင့်အတူတူ ယှဉ်တွဲပြီး ကားစီးချင်စိတ်ကလဲ ပေါ်လာလေသည်။
ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ကားရှေ့ခန်းသို့ သူမတက်ထိုင်လိုက်ပါသည်။ ကားကို ကျင်လည်စွာ မောင်းနေသော သူ့အား မသိမသာ ကြည့်နေမိရင်း သူမရင်ထဲမှ ရင်ခုန်သံစည်းချက်များ ကို သူမပြန်ကြားနေရလေသည်။ သူငယ်ချင်းများသူတို့ချစ်သူများအား အဖြစ်သည်းနေခြင်းကို စာနာတတ်မိလာခဲ့ပြီ။
သူမခေါင်းညိတ်ပြတော့ သူက ကက်ဆက်ခွေလေးအား သွင်းလိုက်သည်။
“ဒီဘ၀မှာမင်းနဲ့တူတူမပေါင်းရပေမယ့်လံ နောင်ဘ၀ဆိုတာ ရှိခဲ့ရင် တောင်းဆုပြုတယ်လေ။ တူတူယှဉ်ကာ ပေါင်းကြရစေသား---”
သီချင်းသံထွက်လာလာချင်း စတော့ခလုပ်ကို သူမဆောင့်ပိတ်လိုက်မိသည်။ ဘာမှန်းလဲမသိ။ စကတည်းက ကွဲတဲ့သီချင်းကြီး။
စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်လိုက်သော သူမသည် သူလှမ်းကြည့်တော့မှ မှားသွားပြီမှန်းသိလိုက်သည်။ ယောက်ျားတယောက်ရှေ့တွင် ဤမျှ ကိုးရို့ကားရာ ဖြစ်မနေသင့်ဘူးမဟုတ်ပါလား။ ပြီးတော့ ထိုသူသည် ဘယ်သူမှန်းပင် သူမမှာ သိသေးသည်မဟုတ်။ ခက်သည်က သူမကို ကြည့်သော ထိုသူ၏ မျက်ဝန်းလေးများသည် သိမ်မွေ့နူးညံ့လွန်းနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူမကကော မည်သို့ပြန်ကြည့်နေခဲ့မိပါသလဲ။ သူမ မသိပါဘူးလေ။
“ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအစ်ကို။ သီချင်းတွေက ခဏခဏ နားထောင်နေရတော့ ရိုးနေလို့ပါ”
မလုံမလဲနှင့် ဖြေရှင်းချက်ထုတ်လိုက်မိသည်။ သူမကိုယ်သူမလဲ ဒေါသထွက်၍ မဆုံး။ ဒေါသတင်မဟုတ်။ မဆုံးသည်ကတော့ ခရီးပါဖြစ်နေသည်။ ခရီး မဆုံးခင် ရွှေညောင်အလွန်၌ ကားဘီးပေါက်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
“ဟာ။ ဆောရီးပဲနော်။ ကျွန်တော် ချက်ကင်မလုပ်ခဲ့မိဘူး”
“ရပါတယ်ရှင်။ အစ်ကိုက လာကူညီတာပဲဥစ္စာ။ ဒရိုင်ဘာမှမဟုတ်တာ”
သူမပြောရင်း၊ ထိုသူနှင့်အတူ ကားပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်။ ဘာတွေလုပ်နေမှန်း သူမကိုယ်သူမပင် မသိတော့။ သူမသိသည်ကတော့ ထိုသူနှင့်အတူ ကားဘီးအတူတူ လဲနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ထိုသူလက်ရမ်းပြောဆိုလိုက်သည်ကို အမှတ်တမဲ့ ကြည့်မိစဉ်ခဏ။
သူမအလန့်တကြား ရေရွတ်လိုက်မိပါသည်။ သူ့အားကြည့်ပြီး ဘုရားတလိုက်သည်မို့ ကြောင်တက်တက်ဖြစ်သွားသော သူ့အား ဂရုမစိုက်မိ။ သိချင်သည်ကိုသာ ဆက်တိုက် မေးလိုက်မိသည်။ အရေးထဲ မဖြစ်စဖူး စကားက ထစ်နေပြန်သေးသည်။
“အစ်ကို။ လက်- လက်”
ထိုသူက သူ့လက်အား ပြန်ငုံ့ကြည့်ပါသည်။
“ဟို-ဟိုလေ။ လက်ကအမှတ်က မွေးရာပါလား”
သူကကြောင်တောင်တောင်နှင့် သူ့လက်အား ပြန်ငုံ့ကြည့်ရင်း ပြန်မေးတော့မှ သူမသတိဝင်လာသည်။
အိပ်မက်ထဲမှအမှတ်နှင့် အပြင်က အမှတ် တပုံစံတည်း တူနေတာကို သွားပြောပြလို့မဖြစ်။
ဒီလိုအူကြောင်ကြောင် အလုပ်မျိုးတော့ သူမလုပ်မည်မဟုတ်။
“ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအစ်ကို။ ရုတ်တရက် သတိထားလိုက်မိလို့ပါ။ ကဲ- သွားကြရအောင်နော်။ အိမ်မှာ ဖွားဖွားတို့တွေ မျှော်နေလောက်ပြီ”
ပြောရင်းဆိုရင်း သူမကားပေါ်သို့ ပြန်တက်လိုက်ပါသည်။ ဒီလိုကိစ္စများအား အယုံအကြည်မရှိပေမယ့် ကြုံဆုံလာရသော တိုက်ဆိုင်မှုလေးများကတော့ အံ့သြဖွယ်ကောင်းပါသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်က အဖြေပေးလာမှာပါလေ။
သူမတွေးရင်း သက်ပြင်းမောတခုကို ချလိုက်မိပါသည်။
“တချိန်ချိန်မှာ ပြောခွင့်ကြုံခဲ့ရင်တော့ ဒီနေ့လေးအကြောင်း အစ်ကို့ကို ပြန်ပြောပြဖြစ်မှာပါလေ”
Short Essays: The Impact of Political Factors on the pursuit of Gains from Trade
The growing rate of international trade is the most visible indicator of international economic interdependence with the overwhelming success of Liberal International Economic Order (LIEO). Alongside, states have become worried that this interdependence may lead to compromise their sovereignty. As international trade relates to international negotiations, international treaties and the trade policy decisions of these sovereign governments,alarge number of political factors have an enormous impact on the pursuit of gains from trade.
International trade is an extension of the reasons for trade withinanation and the most obvious reason is specialization. Individuals specialize in the jobs they do, firms specialize in the goods they produce as well as countries specialize in certain goods they produce. Then countries tried to maximize gains through international involvement in trading with each other. British political economist, David Ricardo, claimed that when all states specialize in goods in which they haveacomparative advantage,anet gain for both partners will result. This law of comparative advantage has become the most important factor for explaining the benefits of free trade and economic interdependence among national economies. Liberal economic theory emphasizes the cooperative side of human nature, commitment to free trade and minimal government intervention.
At the international level,aliberal international economy haveamoderating influence on international politics as it creates bonds of mutual interests andacommitment to the status quo. (Gilpin, 1987) However, “invisible hand”,ametaphor used by eighteen-century political economist, Adam Smith, can only maximize efficiency to pursue gains from trade. It does not mean that these gains will be equal. In fact, the gains from international trade may be distributed unequally.
This inequality issue leads to an important debate about the politics of World Trade Organization (WTO), an organization that was created to monitor the implementation of trade agreements and settle disputes among trading partners. Since the late 1940s,aseries of multilateral trade negotiations were conducted under the sponsorship of the General Agreement of Tariffs and Trade (GATT). It is designed to promote and protect free trade that rests on the most-favored-nation (MFN) principle. It says thatatrade concession granted to one member must be granted to all. Asaresult, countries had to agree to apply the MFN principle towards others when they became members of GATT and its successor, WTO. (Kegley & Wittkopf, 1997) Nevertheless, MFN principle facilitates the exercise of power by the richer states to the poor countries. Asaresult, the idea of developing countries that have consented to what is done in their name in the WTO is questionable. (Bromley, 2004)
Indeed, consent is the basis of domestic politics and at the domestic level; the nature of politics is based on either consent or co-ordination. In contrast, the nature of politics is based on coercion by the powerful at the international level. Moreover, states are sovereign and the international system isacombination of these sovereign states. So it is clear that sovereign states have the rights to determine their domestic affairs and they have no dependence on international rules that have not consented to. However, it was argued that the creation of international rules have intervened into some areas of the sovereign states. (Narlikar, 2004)
Moreover, unlike domestic politics, international political structure is based on the relative power of the states. There are three conventional models of power such as sovereignty model, commodity model and repressive model. The sovereignty model equates power with rule and law; the commodity model casts power as tangible and transferable and the repressive model assumes the action of power to be only negative and repressive. (Brown, 2006) Among them, the sovereignty model is the common political notion of power and it is thought to be exercised over others by sovereign individuals and institutions. So international politics basically involves states striving for coercive power and there is no government order to overarch authority internationally. Indeed, it is characterized by anarchic system.
According to Waltz’s theory of international politics, anarchy leads to the logic of self-help in which states seek to maximize their security. Self-help is the principle of action in an anarchical system where there is no global government. (Dunne & Schmidt, 2005) Waltz createdarealist model that developed the structure of international politics. For him, the principle of organization is hierarchical at domestic system; however, there is no hierarchy between and among states. He also suggested that market relations and specialization and vulnerability they entail operate best underakind of protection (Bromley, 2004). Subsequently, he mentioned that international political system is given by the distribution of powers across the states. So it can be claimed that the rules and institutions to regulate state interactions are determined by power structures.
In terms of pursuit of gains from trade, this model can clearly explain why there has beenafrequent failure of co-operation to make and implement trade rules in the context of trade liberalization. Trade liberalization refers to the reduction or abolition of barriers to trade such as tariffs, quotas and other trade restrictions (Bhattacharjea, 2004) In fact; the imposition of trade restrictions actually imposes double distortion on the economy. When domestic price level deviates from the price level at which the economy can trade with the rest of the world, the economy produces atasub-optimal production point, leading to income loss. Moreover, it also leads toasub-optimal consumption point and further reducing the welfare level (Marrewijk, 2007). To avoid these distortions, multilateral trade negotiations have taken place since the signing of GATT and various attempts have been conducted to reduce trade restrictions. WTO was born from the eighth inaseries of these negotiations.
However, trade liberalization actually leads to more poverty gaps and social disruptions. As state interactions within WTO activities are determined by power structures, as Waltz’s model shows; the richer states have become winners and the powerless states losers. Furthermore, the framework of trade-liberalization is rule-bound, rather than simple co-operation. Asaresult, there has been the frequent failure of co-operation on the pursuit of gains from trade. Waltz’s model accounts for this frequent failure with two implications.
The first implication is related to sovereignty and interdependence. As the gains from cooperation arising from specialization, it can createacondition of interdependence that may compromise the sovereignty and security of the states. In fact, interdependence isacondition of mutual sensitivity and mutual vulnerability. Sensitivity means that changes in one society can be easily transmitted to another through mutual interactions and governments do not have an immediate impact on these reverberations. Accordingly, vulnerability also means that changes in the rules and regulations of one state affect another. (Keohance & Nye, 1989) So it is clear that the worries of state to be threatened by interdependence limits to the successful international co-operation.
The second implication is related to the distribution of relative power. According to Waltz, it can be claimed that even the prospect of large absolute gains among parties do not elicit their co-operation so long as each fears how the others will use its increased capability (Waltz, 1979). States that have to guarantee their own self-preservation may not haveawillingness to co-operate if the outcomes will decrease its relative power.
Therefore, it is obvious thatalarge number of political factors may have an enormous impact on pursuit of gains from trade. Liberals like Adam Smith, David Ricardo promote free trade among nations and structural realists like Waltz identified the limits to international co-operation. In my point of view, the most important essence is the political decisions of the states whether to compromise sovereignty and security for gains from trade.
Bhattacharjea (2004) “Playing by the rules? Developing countries in the world trade regime” in Bromley, Machintosh, Brown & Wuyts (eds) Making the International: Economic Interdependence and Political Order, London: Pluto Press
Bromley (2004) “International Politics: States, anarchy and governance” in Bromley, Machintosh, Brown & Wuyts (eds) Making the International: Economic Interdependence and Political Order, London: Pluto Press
Brown (2006) “Power after Foucault” in Dryzek, Honig & Phillips (eds) The Oxford Handbook of Political Theory, Oxford: Oxford University Press
Dunne & Schmidt (2005) “Realism” in Baylis & Smith (eds) The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 3rd edition, Oxford: Oxford University Press
Gilpin (1987) The Political Economy of International Relations, Princeton, N.J: Princeton University Press
Kegley & Wittkopf (1997) World Politics: Trend and Transformation, 6th edition, New York: St.Martin’s Press
Keohance & Nye (1989) Power and Interdependence, 2nd edition, Glenview I11: Scott, Foresman/ Little Brown
Marrewijk (2007) International Economics: Theory, Application and Policy, Oxford: Oxford University Press
Narlikar (2004) “Who makes the rules? The Politics of developing country participation and influence in the WTO” in Bromley, Machintosh, Brown & Wuyts (eds) Making the International: Economic Interdependence and Political Order, London: Pluto Press
Sloman (1999) Economics, 3rd edition, Prentice Hall
(၆) နောက်ဆုံးတမျိုးကတော့ အထွေထွေ လိုအပ်သော ပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ လေကြောင်းလိုင်း ပိုက်လော့တွေ၊ စီးပွားရေးပညာရှင်တွေ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာပညာရှင် စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာက အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အတတ်ပညာရှင်၊ အသိပညာရှင်၊ ပညာသည်တွေအားလုံးအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့အရေအတွက်၊ အရည်အချင်းတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ၊ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေမှာ အသုံးချလာနိုင်တာနဲ့အမျှ human capital တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို Human capital formation ဖြစ်စဉ်ကို လည်ပတ်နိုင်စေဖို့အတွက် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူများမှ manpower ဆန်းစစ်မှုဆိုတာကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
manpower ဆန်းစစ်ချက်များ ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ရည်မှန်းချက် သုံးရပ် ရှိရပါမယ်။
ဒုတိယရည်မှန်းချက်ကတော့ labour surplus ဖြစ်နေမှုတွေနဲ့ ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကို ဖော်ထုတ်ရပါမယ်။
ခင်မမမျိုး (၂၄၊ ၇၊ ၂၀၀၈)
Essays: The nature of US imperialism in the post- 9/11 international order
In the aftermath of the attacks on the USA of 11 September 2001, President George Bush declared the 'war on terrorism'. Subsequently, the USA and its allies attacked Afghanistan and Iraq. 9/11 wasatransformative moment in strategic and conceptual thinking among political class. Many commentators marked the basic shift of the nature of US foreign policy occasioned by the reshaping of the international order. Some analysts used the language of 'imperialism' to mention the role of USA in the post- 9/11 international order. In this essay, I would like to discuss about the different understandings of the concept of imperialism and assess its relevance to the theories of imperialism. I then want to evaluate its meanings for the boundaries of, and challenges to, the liberal international order.
The concept of imperialism or empire
The first sense of empire was originally derived from the Roman Empire and from the impact of Greek and Christian cultures. In this sense, empire was viewed asahierarchy of polities that producesauniversal order based on shared identities, values and interests, in which one power, the imperial or hegemonic power is raised above the others. In short, empire can be seen asaform of rule, even though direct rule is not required; over many territories and peoples, usually associated with an economic and cultural order that proclaims itself forauniversal civilization. (Leiven, 2003)
The other sense of imperialism was informed by the radical liberal and Marxist critics. At the end of nineteenth and the beginning of 20th century, conflicts among the great powers over the partition of Africa, the Sino- Japanese War, the Spanish-American War, the South African (Boer) War and the Russo-Japanese War signaled the rise ofanew imperialism. In his book of Imperialism: A Study (1902), Hobson claimed as
“The new imperialism differs from the older, first, in substituting for the ambition ofasingle growing empire the theory and the practice of competing empires, each motivated by similar lusts of political aggrandisement and commercial gain; secondly, in the dominance of financial or investing over mercantile interests.” (Hobson, 1902)
Later, Hobson's notion of imperialism became the basic for the thesis of the classical Marxist theory of imperialism. In his analysis of Imperialism: the Highest stage of Capitalism, Lenin developedatheory of inter-imperialist rivalry referring to the tendency of international competition among capitalists to escalate to political competition among states asaresult of the links between national blocs of capital and nation states. He identified the five basic features of imperialism as
“we must giveadefinition of imperialism that will include the following five of its basic features: (1) the concentration of production and capital has developed to suchahigh stage that it has created monopolies which playadecisive role in economic life; (2) the merging of bank capital with industrial capital, and the creation, on the basis of this “finance capital”, ofafinancial oligarchy; (3) the export of capital as distinguished from the export of commodities acquires exceptional importance; (4) the formation of international monopolist capitalist associations which share the world among themselves, and (5) the territorial division of the whole world among the biggest capitalist powers is completed” (Lenin, 1916)
He then emphasized the point of imperialism as the monopoly stage of capitalism and argued that the end result was an increasing militarization of inter-imperialist rivalries.
Alternatively, German Marxist, Kautsky (1970) developedanotion of Ultra- imperialism. It refers to forms of co-operation among imperialist powers in order to secure the mutual interests of internationally operating capitalist firms and the leading capitalist states. Lenin criticized Kautsky's arguments as utopian because there was no agency in the international system. However, theories of US super-imperialism; referring toasituation in which one imperialist power is sufficiently powerful to perform general political and geopolitical functions for all the leading capitalist states and in which subordinate states defer to that leadership, argued that Kautsky's world has been achieved by Leninist means. (Bromley, 2004: 152)
By using these different understandings of the concept of imperialism, we can assess its relevance to describe the nature of US power in the post- 9/11 international order.
The nature of US power and its relevance to imperialism concepts
Power is the ability to influence the behavior of others. Military force and economic sanctions are among the various means that states and non-state actors use to try to influence each other. The nature of US power can be categorized into three different senses relating to theories of imperialism. Firstly, US has been shaping the international order by virtue of the territorial power of the USA being raised above the others and by means of Americanism being something that others want to emulate. Secondly the world can be seen asaseries of rival imperialism, configured in postures of inter-imperialist rivalry but pacified by the overwhelming military power of US imperialism. Thirdly, the relationships among the leading capitalists states can be seen as altogether more co-operative based on the mutual interests of internationally organized capitalist firms and markets.
Moreover, USA also performs the role of coordination cooperation among the capitalist powers asahegemonic coordinator. It has playedakey role in bringingaliberal capitalist order into being. However, the success of the USA in designing this order and the expansion inanumber of key institutions such as the International Monetary Fund (IMF) and the World Trade Organization (WTO), has been challenging the economic dominance of USA. Despite of its privileged role, the USA can achieve its national objectives by working with others inamultipolar world economy.
On the other hand, the states- system is unipolar in terms of military power. Militarily Speaking, the strategic imperative for the USA is to continue to manage the regional balance in the USA- Russia- China triangle outside the liberal core and forestall the emergence of threatening regional hegemon. For the transatlantic alliance, the strategic imperative for the USA is to develop further forms of cooperation. Despite of the development of civilian power along with European integration, European Union's distributive power is only economic, while the US has both economic and military power.
However, this American Empire as the predominant military and economic force in the world has been less stable and less durable after 9/11 attack. Cox (2004) claimed as
“ US unilateralism and its use of coalitions of the willing in impatience with opposition by the majority of states and peoples has divorced the exercise of US power from the legitimacy of universal consent. The American public's sustained support for US military intervention is dubious. The ability of US forces to construct viable administrations in occupied territories has become very doubtful” (Cox, 2004: 312)
In the next section, I would like to discuss about the boundaries of, and challenges to, the liberal capitalist order after the declaration of 'war on terrorism” by the President of the United States of America.
The boundaries of, and challenges to, the liberal capitalist order
The 'war on terrorism' was not the first point of concern for the world when USA and its allies attacked on Afghanistan. However, the subsequent mobilization against Iraq and the new doctrine of pre-emption at work in US foreign policy have raised concerns about the US empire. After the invasion of Iraq,agroup of western European notables, publishedadeclaration reaffirming the vital importance of Europe's association with the USA (Cox, 2004: 315) Critics argued that the balance of rule shifts inamore coercive action with the declination of the economic components of US super- imperialism.
From Marxist gloss, Ellen Meiksins Wood claimed that invasion of war representsadeclaration of war on all states that dared to challenge the US- dominated international order andadeclaration of infinite war in which US super-imperialism would discipline other states in the system. (Wood, 2002: 25) So it is clear that post- 9/ 11 international order has been shifted from containment and deterrence toadoctrine of pre-emption in which the USA reserved the right to strike militarily adversaries abroad. Before 9/11, US policy towards Iraq was one of the containment and deterrence based on the principles of UN monitored disarmament and economic sanctions After 9/ 11, the logic of polices were shifted.
Strategically speaking, the action in Afghanistan was simplyadefensive response, in contrast, the war on Iraq was clearlyapreemptive response. A new strategy for dealing with the 'west Asian crisis' as called by Halliday has emerged to establish common interests by means of national building because 'Americanism' was established hardly in the west Asian region including the Arab states of Middle East, Iran, Afghanistan and Pakistan (Halliday, 2002).
In addition, strategic and resource significance plays an important role in the emergence of US imperialism. According to the prediction, over two thirds of the world's oil will come from the the Persian Gulf Region by 2020. So the oil and gas resources of the Middle East and Central Asia have becomeavital interest by the western capitalist powers as well as China and India. In fact economic interest was the first priority, as Noam Chomsky pointed out that the real motive of US invasion was merely establishing the first secure military based in dependent client state at the heart of the energy producing region of the world. (Chomsky, 2004)
However, the imperial policy of US can trigger the temptation and the danger for itself because imposing unilateral interests can provoke some powers to balance against it. Moreover, compellance strategy of using the military power to forcibly change political circumstances can only work for some countries if they do not have nuclear weapons. So US should not adopt this strategy asageneral recipe for the international order to discipline states.
Indeed, there should be some social movements to induce the rise of American imperialism and the mind-sets and thinking styles of the people all over the world. Cox suggested to induce an American 'hyper- power' to abandon the mirage of 'exceptionalism' and bring it back into membership along with other states inacommunity of nations. He also advised to bring the thinking of the global people back to the choices between one homogenous world to be shaped into one civilization andaplural world of coexisting civilizations as well as betweenafundamentalist drive towards an absolutist moral unity and an expectation of diversity with tolerance andawillingness to confront the frustrations ofasearch for consensus on diverse issues. (Cox, 2004; 314-319)
To summarize, the nature of US imperialism in the post- 9/11 international order is based on the model that seeks others to emulate and to coordinate power in an ultra- imperialist model. But the role of US military power inacoordinated liberal capitalist international order is more ambiguous than the simple balance of power of super-imperialist considerations.
Bromley, S. (2004) “American Power and the future of international order” in Brown, W.; Bromley, S. & Athreye, S. (eds) Ordering the International: History, Change and Transformation, Pluto Press, London
Cox, P. (2004) “Beyond empire and terror: critical reflections on the political economy of world order”, New Political Economy,9(3), pp. 307-323
Chomsky, N. (2004) “On American Imperialism and British Me Too-ism, BBC News, May 19, 2004, Online Version
Hobson, J. (1902) Imperialism: A Study, Online Version
Halliday, F. (2002) Two hours that shook the world, September 11, 2001: Causes and consequences, London, Sarfi books
Kautsky, K. (1970) “Untra-imperialism”, New Left Review 1, 59, pp. 41-46, 2nd edition
Leiven, D. (2003) Empire, Pimlico, London
Lenin, V. (1916) Imperialism: the Highest stage of capitalism, Online Version
Wood, E. M. (2002) “Infinite War”, Historical Materialism, 10 (1), pp. 7-27